२०६ जना केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुले पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई छाडेर देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा::KhojOnline.com
२०६ जना केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुले पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई छाडेर देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा
भदौ, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुले पनि विद्रोह गरेका छन् ।
२०६ जना केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुले पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई छाडेर देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित ध्रुविकरण केन्द्रीय संयोजन समितिलाई समर्थन गरेका हुन् ।
पार्टीका संघीय परिषद् सदस्य बलराम पुनको नेतृत्वमा २०६ जना केन्द्रीय परिषद सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्तिमार्फत देवेन्द्र पौडेलको समूहलाई समर्थन गरेका हुन् ।
यस अघि नेता देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा १६ जनाको समूहले बाबुरामलाई छोडिसकेको छ ।
देवेन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरु